जिन्दगी सायद नबाचेको भए यी अनगिन्ती चोटहरु संगाल्ने मौका मलाई पनि अदृश्य भनिने भगवानले पनि दिदैनथिए होला । हरपल हर क्षण घुम्तिहरुमा किन त्यो तस्वीर नयन भरि आँशु झै टिलपलि गर्दै छल्कि रहन्छ ? विधिको विधान हो की विडम्बनाको खेल ? कर्मको लेखा हो की भाविनीको भुल ?
समयले पनि किन यसरि रुवाउदो रहेछ ? दुखिया र भुखियाहरुलाई आज ११ बसन्त पुरा भएछ । उनको यादले स्पन्दका कुना छिया–छिया पार्न थालेको ।
बोलाउदा अ‍ोय रितु…भनेको शब्द नसुनेको पनि कतिका बर्ष गएछन, कुनै बेला बम बारुदको धुँवाभित्र हाम्रो प्रेमको सानो कोपिला फुलाउने रहरमा थियौ ।
बर्षभरी सेताम्य देखिने त्यो भद्र शालिन र गौरवपुर्ण श्रृखला धौलागिरीको फेदीमा हामी राता गोली र संगिनका विरुद्ध धावा बोल्ने न्यास्रो रातिमा फुस्रो विजयको आडम्बर बोकेर बसेका हुन्थ्यौं । समयको बहकाई पनि आफ्नै पाराको हुन्छ ।
विचारमा एकता र भावनामा शालिनता भए सायद जीवन संगै जिउने निर्णय लिन कति नै पो गाह्रो हुथ्यो र ? केहि समयको प्रेमपछि हाम्रो जनबादी विवाह सम्पन्न भयो र हामी जिन्दगीका धेरै चुनौतीसंगै सम्हालिन थाल्यौं ।
ढुंगा–गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
वाढी पहिरो पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा लाग्न विप्लवको निर्देशन